July 8, 2021 - ApannPyay Media
သင့်အိမ်ဝင်းထဲမှာ မြွေတွေ အဝင်အထွက်ရှိနေလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် မြွေတွေပြေးစေမည့် သဘာဝနည်းလမ်း
July 8, 2021 by ApannPyay Media
သင့်အိမ်ဝင်းထဲမှာ မြွေတွေ အဝင်အထွက်ရှိနေလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် မြွေတွေပြေးစေမည့် သဘာဝနည်းလမ်း အိမ်ခြံမြေအတွင်း မြွေတွေ့လျှင် လုပ်ရမည့်နည်း သင့်အိမ်ဝင်းထဲမှာ မြွေတွေအဝင်အထွက်ရှိနေလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် မြွေတွေပြေးစေမည့် သဘာဝ နည်းလမ်းလေးပါ။ သဘာဝ ဆေးနည်း ပါဝင်ပစ္စည်း ဆေးရွက်ကြီး(စွန့်ပစ်ထားသော) ဆေးရိုးများ၊ ဇီးဖြူသီး၊ ဇီးဖြူရွက် ဆေးရွက်ကြီးဆေးရိုးများ အမှုန့်ကြိတ် ဖြူးပေးပါ။ ဆေးရွက်ကြီး/ဆေးရိုးများ ရေစိမ် ပက်ဖြန်းပေးပါ။ ဇီးဖြူသီး/ရွက်များကို မြွေလာနိုင်သော နေရာများတွင် ပက်ကျဲပေးပါ။ ဇီးဖြူသီး/ရွက်များကို ရေဖြင့်ရောစပ် အရည်ကြိတ် ပက်ဖြန်းပေးပါ။ အဆင်ပြေသောနည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စာကြွင်း ။ ။ကျေးဇူးရှင်တောင်သူဦးကြီးများသို့ လယ်မြေ/ ယာမြေ/ ဥယျာဉ်ခြံတွေထဲမှာ မြွေအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေဖို့ ဆေးရွက်ကြီး (စွန့်ပစ်ထားသော) ဆေးရိုးများ ဖြန့်ကျဲပေးပါ။ မိုးရွာလာရင် ဆေးရွက်အရည်များကို ရှုရှိုက်မိပြီး မြွေဆိုးများ မူး/မေ့ … Read more
မကေခိုင်မိုးအား သတ်ခဲ့သော တရားခံများဖမ်းမိပါပြီ
မကေခိုင်မိုးအား သတ်ခဲ့သော တရားခံများဖမ်းမိပါပြီ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောင်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းအရှေ့တောင်ဘက်(၃)မိုင်ခန့် ကျောင်းကုန်းမြို့ကိုင်းတာကျေးရွာအုပ်စု၊၊ကျောင်းကုန်း-ကိုင်တာကျေးရွာလမ်းတွင် ၇.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညေန ၆နာရီအချိန်ခန့်တွင် ချေးငွေလုပ်ငန်းကုမ္မဏီ တစ်ခုမှအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဓါးနှင့်ခုတ်တုတ်နှင့်ရိုက်ပြီးဆိုင်ကယ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများပါယူဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်၊ ၊ ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၁၂၁ ဇူလှိုင် ၇ ရက် ည ရနာရီ အချိန်ခန့် တရားလို **”””,၅၂နှစ်၊ ပိန်းဂရက်ကြီး ကျေးရွာ ကွင်းကြီးအုပ်စု၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်နေသူသည် နေအိမ်၌ မိသားစုများနှင့်အတူရှိနေစဉ် လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်ခန့်မှ ယနေ့အချိန်ထိ တရားလို၏နေအိမ်တွင် လာရောက်နေထိုင်ပြီး ကျောင်းကုန်းမြို့ မြကျွန်းသားချေးငွေ လုပ်ငန်းရုံးတွင် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသော ဒါးကတိုက်နယ် ပုံတောချောင် ကျေးရွာဇာတိဖြစ်သူ ကေခိုင်မိုး၊ ၂၅နှစ် (ဘ) ဦးထွန်းရီ မြကျွန်းသား ငွေဝန်ထမ်းပုံတောချောင်းကျေးရွာ၊ ဒါးကတိုက်နယ်၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်နေသူမှာ ကိုင်းတာကျေးရွာလယ်ကွင်းများအား ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ် ထားသောလမ်း၏ တံတားအနီးတွင် ဒဏ်ရာများဖြင့် … Read more
ဇူလိုင် ၉ရက် နေ့ ၁၀ ရက်နေ့ ဝုန်းမယ့် ဒေသများ 2021 ဇူလိုင် ၉ရက် နေ့ ၁၀ ရက်နေ့ မေမြို့မှာမိုးပြန်ရွာဦးမယ် သပိတ်ကျင်း ဝါးဖြူတောင် ကျောက်မြောင်းရွှေဘို ခင်ဦး ရေဦး တန့်ဆည် ကာဘိုး ဇီးကုန်း ဟံလင်း ဝက်လက် ဆားတောင် မင်းကုန်း ခိုတောင် စဉ့်ကူး ရေနံသာ မတ္တရာ မန္တလေး ပုသိမ်ကြီး အုန်းချော အမရပူရ အင်းဝ စစ်ကိုင်း ငါန်းဇွန် တံတားဦး ကျောက်ဆည် မြစ်သား နွားထိုးကြီး ကူမဲ ဝမ်းတွင်း မိတ္ထီလာ မလှိုင် ဝမ်းတွင်း သာစည် ယင်းမာပင် ကလော မိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ် credit-su su san ဇူလိုင္ ၉ရက္ … Read more
ခြင်တွေပြေးအောင် သင့်ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ဒီအပင်လေး (၅) ပင် စိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်
ခြင်တွေပြေးအောင် သင့်ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ဒီအပင်လေး (၅) ပင် စိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော် မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ခြင်တွေကို ခြင်ဆေးခွေ၊ ခြင်ဖျန်းဆွေးတွေနဲ့ နှိမ်နှင်းနေတုန်းလား? ဒါက အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အန္တရာယ်များလွန်းပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အန္တရာယ်မများဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ခြင်တွေပြေးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ အပင်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အပင်စိုက်တာလည်း ဝါသနာပါတယ်၊ ခြင်တွေကိုလည်း သဘာဝ နည်းလမ်းအတိုင်း နှိမ်နှင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေဟာ မိမိတို့ မီးဖိုခန်းအတွက်လည်း အသုံးဝင်တာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေကို စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မိမိတို့ မီးဖိုခန်းရဲ့ ငွေယိုပေါက်က တစ်ဖက်တစ်လမ်းက … Read more
နှလုံးကျန်းမာရေးအပြင် အခြားရောဂါတွေအတွက်ပါ ဆေးဖက်ဝင်အကျိုးများတဲ့ အာတာလွတ်ဥ
နှလုံးကျန်းမာရေးအပြင် အခြားရောဂါတွေအတွက်ပါ ဆေးဖက်ဝင်အကျိုးများတဲ့ အာတာလွတ်ဥ အာဟာရနဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်များတဲ့ အာတာလွတ် အာတာလွတ်ဥလေးကိုပြုတ်၊ ဆီလေးဆားလေးနဲ့ စားရတာ အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးရယ်။ မြန်မာ့အစားအစာတွေထဲမှာ နေရာတစ်နေရာယူထားတဲ့ အာတာလွတ်က ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့လည်း လူကြီးတွေပြောဖူးပါတယ်။ အာတာလွတ်မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်တွေကို သိပ္ပံပညာလေ့လာမှုအထောက်အထားတွေလည်း တွေ့ရှိထားပါတယ်။ အာတာလွတ်မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ဗီတာမင် ဘီတွေ အပြင် ကယ်လ်စီယမ်၊ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်တို့လိုသတ္တုဓာတ်တွေကြွယ်ဝတယ်။ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်တော့ အာဟာရအတော်ပြည့်စုံပါတယ်။ဆေးဖက်ဝင်အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။ အစာကြေတယ် အစာခြေစနစ်မှာ အမျှင်ဓာတ်က အရေးပါဆုံးထဲပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်က အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ အစာတွေရွေ့လျားမှုကောင်းမွန်စေပြီး အာဟာရဓာတ်တွေစုပ်ယူနိုင်အောင်နှိုးဆွပေးပါတယ်။ သူက ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာတွေကို ပျောက်ကင်းစေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြောင့်ပဲ ပိုလျှံနေတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကို ရှင်းလင်းပေးပြီး နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ် … Read more
အရိုးပြုတ်ရည်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖျားနာခြင်းမှ လျင်မြန်စွာ သက်သာစေနိုင် ခုခံအားမြင့်တင်ဖို့အတွက် တန်ဖိုးအနည်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးအစားအစာကို ပြောပါဆိုလျှင် အရိုးပြုတ်ကို ပြောရပါမည်။ အသားမဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ကြက်ရိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ဝက်ရိုးဖြစ်ဖြစ်၊ အမဲရိုးဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရိုးတွေနဲ့ အရိုးပြုတ်တစ်ခွက်ချက်လို့ရပါတယ်။အရိုးပြုတ်ရည်တွေမှာ သတ္ထုဓာတ် နှင့် ဗိုက်တာမင်တွေအပြင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အရိုးပြုတ်ရည်မှာပါတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေက လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် အူနံရံပြုပြင်ကိုလည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခုခံအားစနစ်ရဲ့ ရာနှုန်းတော်တော်များများကို အူလမ်းကြောင်းရဲ့GALT လို့ခေါ်တဲ့ gut associated lymphoid tissue က ထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ။ ဒါကြောင့် အရိုးပြုတ်ရည်က အူလမ်းကြောင်းကောင်းစေပြီး ခုခံအားမြင့်တက်လာစေပါတယ်။အရိုးပြုတ်ရည်မှာပါတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် glycine က ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ glutathione ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပြီး oxidative stress ကို သက်သာပါစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရိုးပြုတ်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖျားနာခြင်းမှ … Read more
စောင်းလျားသီးနှင့်ကျန်းမာရေး စောင်းလျားသီးကို ဓားနဲ့ ပါးပါးလှီး ကြည့်တဲ့အခါ ကြယ်ပုံနဲ့တူလို့ Star Fruit လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။မှည့်လာရင် ချိုချဉ်ချဉ် အရသာရှိပါတယ်။စောင်းလျားသီးမှာ အာဟာရများစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်စီ ပါဝင်မှုများပါတယ်။ ပုံမှန် အလတ်စား စောင်းလျားသီး တစ်လုံး( ၉၁ ဂရမ်) မှာအမျှင်ဓာတ် -၃ ဂရမ်၊အသားဓာတ် ၁ ဂရမ်၊ ဗီတာမင်စီ နေ့စဉ်စားရမဲ့ ပမာဏရဲ့ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီတာမင် B5 နေ့စဉ်စားရမဲ့ ပမာဏရဲ့ ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ဖောလိတ် ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကော်ပါး ၆ရာခိုင်နှုန်း၊ ပိုတက်စီယမ် ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ မဂ္ဂနီစီယမ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ စောင်းလျားသီးမှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု နည်းပါးပါတယ်။ ၁။ … Read more
သတင်းတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိက္ခာပိုင်းအရ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ခွင့်လွှတ်လက်ခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း ရေးတင်လိုက်တဲ့ ထားထက်ထက်
စခန်းမှာ ထပ်တိုးလာတဲ့သူတွေ အတွက်ရယ် စခန်းရဲ့ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ အတွက်ရယ် နေစရာ ၊ ဝတ်စရာ နဲ့ စားစရာတွေ လိုအပ်လာတာသိလို့ အလှူငွေအတွက် ကြိုးစားတဲ့အခါ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို စတေးရပါတယ် လုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်သွားတဲ့အခါ ၊ ဒလံက ကိုယ့်အရေးပေါ်ပြေးလမ်းပါ သတင်းပေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ရှောင်တိမ်းဖို့ ပြင်ထားတဲ့နေရာရဲ့( စခန်းတခုလုံးရဲ့လုံခြုံရေးအရ ) ဒုတိယစီမံချက်ကို လိုက်လျှောက်ရတယ်… အဲ့ဒီ အချိန်အထိလဲ အလှူရသမျှ စခန်းအတွက်ကောက်ခံပေးနေတုန်းပဲ အလှူငွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ crypto currency ကို အဖွဲ့တခုရဲ့ mail နဲ့ ဖွင့်ထားလို့ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်…. (messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်) စင်္ကာပူက ရသမျှ ပို့တဲ့ အမထံ ငွေစာရင်းထားရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ငွေ မကိုင်ပါ ကိုရီးယားက အမထံ … Read more